Accounting & Finance industry မှာ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးသား Certifications တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AAT ကတော့ UK အခြေစိုက် Association of Accounting Technicians (AAT) အဖွဲ့အစည်းကပေးအပ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာ Institute of Accounting Staff (IAS) နှင့် the Association of Technicians in Finance and Accounting (ATFA) လူသိများတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဟာ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စာရင်းအင်း အခန်းကဏ္ဍမှာ လိုအပ်နေ Accounting Technicians လူစွမ်းအားအရင်းအမ
အရင်တစ်ခေါက်မှာ CFO Title အတွက် လိုအပ်တဲ့ Skill Set ၃ ခုထဲ့ က Financial Planning & Analysis ဆိုတဲ့ Skill ဆိုတာ ဘာလဲနဲ့ ဘာကြောင့် Finance Professionals တစ်ယောက် အတွက် အရေးကြီးလဲဆိုတာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်မှာ တော့ CFO တစ်ယောက် career လျှောက်လှမ်းဖို့အတွက် မရှိဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Skill Set တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Treasury management (တစ်နည်းအားဖြင့် Cash Management) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြချင်ပါတယ် Treasury Management စီပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ငွေ(ပိုက်ဆံ) ကို ကောင်းမ
ဟိုရှေးရှေးတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ ဝက်ကလေး ၃ ကောင်ရှိသတဲ့… တစ်နေ့ကျတော့ ဝက်ကလေးတွေက အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီး ငါတို့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကြမယ်ဟေ့… ဆိုပြီး မြေခွေးကြီး ဆီကနေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ချေးငွေယူ လိုက်ရော ပထမဝက်ကလေးက အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေချာမလေ့လာဘူး စိတ်ကူးပေါက်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ကောက်လုပ်လိုက်ရော၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကလည်း မကောင်း ကိုယ့်အလုပ်အကြောင်းလဲ သေသေချာချာ မသိတော့… ငွေတွေကလည်း မကုန်သင့်တဲ့ နေရာတွေကုန်… သူထင်ထားသလောက် ဝင်ငွေမရဘဲ ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်နဲ့ နောက်ဆုံး သူပ
CFO တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်တွေကို အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့်ပြောရရင် ကိုယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ Cash Flow အဝင်အထွက်များကိုလေ့လာစမ်းစစ်ခြင်း… Financial Performance အခြေအနေကိုသေချာလေ့လာသုံးသပ်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ Financial Strategy နဲ့ Plan များရေးဆွဲခြင်း အကြံပြုခြင်း… အစရှိတဲ့ တာဝန်များကို အဓိကထမ်းဆောင်ရပါတယ်… အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ function တွေကို Financial Reporting (Controlling), Financial Planning & Analysis (FP&A), Treasury (Liquidity Management) ဆိုပြီ
Certificate for DocumentaryCreditSpecialists (CDCS)နဲ့ Certificate in InternationalTrade and Finance
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Trade Banking Sector မှာ Professionals Career တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်တဲ့ မည်သူမဆို မဖြစ်မနေကိုင်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု 🤗🤗🤗 Certificate for Documentary Credit Specialists (CDCS) နဲ့ Certificate in International Trade and Fi Programs များကို မကြာခင်မှာ Matrix Smart Learning Class Online Conferencing Method အသုံးပြု၍ စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မည့်ဖြစ်ကြောင်းလေစားစွာဖြင့်အသိပေးအပ်ပါတယ်… အဓိကသင်ကြားပို့ချမည့် Lectures များကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးသော CD
Certificate in Trade Finance and Transaction Banking‼️‼️‼️(CITF Exam Prep Course)
Certificate in Trade Finance and Transaction Banking‼️‼️‼️ (CITF Exam Prep Course) မြန်မာနိုင်ငံ Banking Industries ရဲ့ အသက်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Trade Financing အပိုင်း ဒါမှမဟုတ် Business တွေရဲ့ Corporate တွေရဲ့ Trade Department မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုတဲ့ လူငယ်တွေ နဲ့ ပြည်တွင်ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ထပ်မံ ချဲ့ ထွင်ချင်တဲ့ Professionals တွေအတွက် လုပ်ငန်း မှာ မရှိမဖြစ်သိထားသင့်တဲ့ Knowledge တွေကို ဖြည့်ပေးဖို့အတွက် “Trade Finance” နှင့် နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့ Trading I
📣 𝗔𝗖𝗖𝗔 (Association of Chartered Certified Accountants) တက် ရောက်နေသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအ
ACCA ဘာသာရပ်များမှ * Financial Reporting ( F3, F7 and P2) * Cost and Management Accounting, Financial Management, Performance Management etc ( F2, F5, F9, P3, P4, P5) တို့ကိုတက် ရောက်နေသောကျောင်းသားကျောင်းသူများ နှင့် Chief Accountant, Senior Accountant နှင့်် Finance Manager Position တွေမှာဝင် ရောက်လုပ်ကိုင်မည့်် Professionals တိုင်းအတွက် Complementary ဖြစ်စေမည့် Financial Modeling အတန်းကို Matrix Institute ရဲ့ Smart Learning Class မှမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Matrix ရဲ့ Financial
Register now for Matrix’s CFA Level I Exam Prep Program (Batch – 7)
Why you should study CFA at Matrix Institute of Professionals? - သင်ဟာ CFA exam ဖြေဆိုဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ Candidate တစ်ယောက်ဆိုရင် ဘာကြောင့် Matrix’s ရဲ့ CFA Exam Prep Program ကို ရွေးချယ်သင့်လဲ… 🤓 🤓 🤓 - ဘာကြောင့် Matrix က one of the leading Finance education and training institutions in Myanmar ဖြစ်နေတာလဲ… 🤩 🤩 🤩 - နောက် Matrix ရဲ့ Program တွေက အခြား သင်တန်းကျောင်းတွေထက်ဘာလို့ တန်ဖိုးကြီးနေတာလဲ… 🤑 🤑 🤑 ဆိုတာတွေကို အချက်4ချက်နဲ့ ပြောပြပါရစေ… - 1. Lecture 👩‍🏫 👨‍🏫 Ma
Introduction to Derivatives Trading
Derivatives တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ Financial Market ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလာမယ့် Financial Instruments တွေဖြစ်ပါတယ်။ - Derivatives ကို အလွယ်ဆုံးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် အခြား Asset တစ်မျိုးရဲ့ တန်ဖိုး တစ်ခုပေါ်ကနေ ဆင့်ပွားလာတဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖန်တီးမှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 💱 - ဉပမာ - Export လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဉီးက နောက်သုံးလကြရင် နိုင်ငံခြားကနေ ဒေါ်လာ အကြွေးတွေ ရစရာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းက အတက်အကျနောက် သုံးလမှာ ဘာဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ မသိပါဘူး။ သူ့အနေ
Financial Modelling: Essential Tool for Finance Professionals
Finance and Account Professionals တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Financial Modelling Skill Course ကို Matrix Institute of Professionals မှ အိမ်ကနေ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်တဲ့ Smart Learning Class များအနေဖြင့်ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ - Matrix ရဲ့ Financial Modelling Course မှာ 🔸လုပ်ငန်းအနေအထားတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်နိုင်မည့် Financial Ratio Analysis 🔸လုပ်ငန်း၏ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတန်းများ၊ assumption များ၊ valuation method များကိုအသုံးပြုကာ အနာဂတ်လုပ်ငန်းအနေအထားများ၊ လုပ်ငန်းတန်ဖိုးများ အစ
လုပ်ငန်းတူနယ်ပယ်တူ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား တချို့တွေကတော့ ရေရှည်မှာအောင်မြင်နေကြပြီး အခြားလူတွေအတွက် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ထက် လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲ အတော်ရုန်းကန်နေရတဲ့ အခြေအနေ၊ မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံး လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့ အခြေအနေတွေဟာ ကြုံတွေ့နေရတာဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ? 🤔🤔🤔 ဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုက ကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့value ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာ သေချာမသိတာပါ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ Value (တန်ဖိုး)ဆိုတာဘာလဲ? 🙄 ငွေကြေးဆိုင်ရာတန်ဖိုးတွေရှိမယ်၊ ငွေနဲ့တိုင်းတာဖို့မလွယ်တဲ
Business Performance ကို ဒီ Post လေးဖတ်ပြီး (၅) မိနစ် အတွင်း မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
Business ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် (Performance) ကို မြှင့်တင်ဖို့ ပထမဆုံး အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုက အချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲနေတဲ့ ကိုယ့် customer တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို နားလည်သဘောပေါက်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဉပမာ COVID-19 မတိုင်ခင်ကာလမှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် အတွက် ဆိုင်ကို Customer ရောက်လာဖို့နဲ့ ရောက်လာတဲ့ Customer ကို Satisfied ဖြစ်အောင် ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်ဖို့က အဓိကဖြစ်ပြီး၊ အခုအခြေအနေမှာတော့ မိမိ Customer တွေဆီကို သူတို့ကြိုက်တဲ့ အစားသောက်တွေကို သန့်သန်ရှင်းရှင်းနဲ့ အချိန်နဲ
Finance and Account Professionals တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Financial Modelling Skill Course ကို Matrix Institute of Professionals မှ အိမ်ကနေ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်တဲ့ Smart Learning Class များအနေဖြင့်ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ - Matrix ရဲ့ Financial Modelling Course မှာ 🔸လုပ်ငန်းအနေအထားတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်နိုင်မည့် Financial Ratio Analysis 🔸လုပ်ငန်း၏ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတန်းများ၊ assumption များ၊ valuation method များကိုအသုံးပြုကာ အနာဂတ်လုပ်ငန်းအနေအ�